Ambulaansiin beelladaa Itoophiyaatti kan 'jalqabaa' taate hojii eegalte - BBC News Afaan Oromoo
Ambulaansiin beelladaa Itoophiyaatti kan 'jalqabaa' taate hojii eegalte
Amma dura ambulaansiin haadholii da'umsaa ciniinsuun itti dhufe yookaan namoota dhukkubsatan gara mana yaalaatti deddeebisuudhaan kan beekamu. Haa ta'u malee, kan bineeldotaa hin baramne.
Amma garuu beelladootas hireen tuni dhaqqabaa jirti. Dhukkuba yaalamuun akka hin duuneef, yoo dhala irratti rakkatanis ambulaansiin sagalee qarattee lallabaa dhaqabuuf hojii eegalteetti.
Ambulaansiin beelladaa Itoophiyaatti kan jalqabaa taate kana Yunvarsiitii Finfinneetti Koolleejjii Fayyaa Beelladaa Fi Qonnaa Bishooftuutu hojii jalqabsiise.
Diiniin Koollejjichaa Gargaaraa Piroofeesaraa Hiikaa Waaqtolaa BBC'tti akka himanitti, beelladoonnis dhibee sardaa fi da'umsarratti yoo rakkoon isaan mudate ogeessonni Ambulaansidhaan qaqqabu jedhu.
Hospitaala fardaa wallaansa ol-aanaaf Bishooftuutti baname
Daldalli seeraan alaa harrootaa ammas Itoophiyaatti yaaddoo uume
"Itoophiyaan baay'ina beelladaatiin addunyaarraa 5ffaa Afrikaarraa jalqabarratti argamti. Jireenyi qonnaan bulaa fi Horsiisee bulaas beelladoota irratti kan hundaa'edha.
Kanaafuu fayyaa beelladootaa eeguun jireenya hawaasa keenyaa fooyyessuudha. Nutis kanumaaf tajaajila haaraa kan Ambulaansii kana kan jalqabne," jedhan.
Koollejjichi tajaajila Ambulaansii beelladaa kana Ambulaansii tokkoon jalqabus fakkeenyummaa gaarii waan qabaatuf fulduratti babal'achaa deema jedhan.
Akkaataa itti ambulaansii kuni beelladoota tajaajiltu yoo himanis: "Ambulaansiin kuni horii baachuufii miti.
Yeroo beelladni dhukkubsatu ogeessota muuxannoo guddaa qabanii fi meeshaalee wal'aansaa guutuu ta'ee fi tajaajila yaalaa kamuu kennuu kan dandeessisu baatee bakka beelladni jiru sanatti yaalli kennama" jedhan.
Babal'ina magaalotaatiin walqabatee keessumaa loon aannanii sanyii filatamoo tahan daandii dheeraa deemuu waan hin dandeenyeef amma yoo dhukkubsatan ambulaansii kanaan bakka waamametti tajaajiluuf haala mijataa akka uumus himan.
Ogeeyyiin fayyaa beeladaa garaacha horii tokko keessaa pilaastika kg50 baasan
Fardeen diidaa Gaara Qundhudhoo attamiin daggalatti hafan?
Ammaan duras koolleejjichi tajaajila yaala beelladootaa Hawaasa magaala Bishooftuu fi naannawa isheetiif kennaa kan ture yoo ta'u beelladni gara koolleejjichaa dhufuuni kan yaalamu.
Amma garuu yoo dhukkuba cimaas ta'e ambulaansitu gara beelladichaatti deemee tajaajila.
"Amma fakkeenyaaf horii da'umsaaf foolachaa jirtu karaa dheeraa deemsisanii nubira fiduun baayyee ulfaataadha. Yoo isaan nutti bilbilan yerosuma ambulaansii kanaan deemnee tajaajilla" jedhan.
Ambulaansiin kuni ammaaf magaala Bishooftuu fi naannawa isheetti kan tajaajiltu yoo ta'es, fuula duratti lakkoofsa ambulaansotaa dabaluun iddoowwan biroottis tajaajila kana bal'isuuf akka hojjetamus himan gargaaraa Piroofeesaraa Hiikaan.
Hawaasni magaalaa Bishooftuu fi naannawashees bilbila ambulaansii kanaa irratti maxxanfame qabachuudhaan yeroo barbaadanitti bilbilanii gatii gadi aanaadhaan tajaajila kana argachuu akka dandahanis himan.
Hojii koollejjichi jalqabeen alatti mootummaanis tajaajila akkanaa kana yoo eegale du'a beelladaa salphaatti yaalamuu danda'uun gahu hir'isuun miidhama qonnaan bultootarra gahu xiqqeessuun akka danda'amus dhaaman.
Yunivarsiitii Finfinneetti Koolleejjiin Fayyaa beelladaa fi Qonnaa Bishooftuu kuni amma duras Hospitaala beelladootaa banuun tajaajila kennaa jiraachunsaa niyaadatama.
Booranatti ogeeyyiin fayyaa beeladaa garaacha horii tokko keessaa pilaastika kg50 baasan
25 Adooleessa 2020
Fardeen diidaa Gaara Qundhudhoo attamiin daggalatti hafan? Amma maalirra jiru?
19 Waxabajjii 2020
Akkaataa qilleensa ho'aa keessaatti rafuun danda'amurratti gorsawwan 10